ဘိုကလေးဈေး ဂမုန်းပွင့် သွားပါဦးမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ဘိုကလေးဈေး ဂမုန်းပွင့် သွားပါဦးမည်
ဘိုကလေးဈေး ဂမုန်းပွင့် သွားပါဦးမည်
Posted by etone on Jun 11, 2013 in Complaint / Claim, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 11 comments
1st , June 2013 ( 5:10am)
ညဉ့်နက်ပိုင်းကတည်းက အငြိုးကြီးစွာဖြင့် သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာထားသောမိုးကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး စိုစွတ်ကာ အေးစိမ့်နေပါတယ် ။ မိုးအေးအေးဖြင့် ကွေးနေရတဲ့အချိန်က မက်မောစရာကောင်းလွန်းသော်လည်း ၊ အသံသေး အသံကြောင် မြည်နေတဲ့ နှိုးစက်ကြောင့် လန့်နိုးလာခဲ့ရတယ် ။ ကျွတ်ကျွတ်ညံအောင် အော်နေတဲ့ နှိုးစက်ကို မျက်စိမဖွင့်ပဲ လက်တဖက်ဖြင့် ပိတ်ပစ်လိုက်တယ် … ။ ကိုယ်ပေါ်ခြုံထားပါလျှက် တ၀က်စွန်းတစ ကုတင်အောက်ထိ ပြုတ်ကျနေတဲ့ စောင်ကို ခပ်တင်းတင်းဆွဲပြီး ခေါင်းမြီးခြုံကာ ပြန်ကွေးနေခဲ့မိတယ် ။ ဒီအချိန် ကမ္ဘာပျက်လျှင်တောင် ထမကြည့်ဘူးလို့ တွေးရင်း ၊ တဖန်ပြန်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ် ။
ထမင်းဆယ်ရက် မစားရတဲ့ ဗိုက်တစ်လုံးထဲ နတ်ကန္နား ပေးနေသလို ဆူညံသံမျိုးဖြင့် အသံတသံ နားထဲဝင်လာတယ် ။ မကြားချင်လည်း ကြားနေရတဲ့ အသံက နားထဲ ကန့်လန့်ဝင်နေပါတယ် ။ နားနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းပိတ်လို့ ပြန်အိပ်မယ် ကြိုးစားရင်း ၊အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ထဲ… ဒီအသံကြားဖူးသလိုလို …. ။ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ အဆက်မပြတ်မြည်နေတဲ့ .. အသံက .. ဖုန်းသံလို့ သိသိချင်း ၊ အိပ်နေရာက ထထိုင်မိလျှက်သား ဖြစ်သွားတယ် ။ ဖုန်းပေါ်က နံပါတ်ကိုကြည့်ရင်း … ခေါင်းနပမ်းကြီးသွားတယ် … ရုံးပြေးတစ်ယောက် …မကြာခင် ခေါင်းဆင်းနင်းခံရတော့မယ် …
ဒီမနက်ပိုင်း မဖြစ်မနေ အရေးတကြီး လုပ်ပေးစရာရှိသည့် ကိစ္စများ ရှိနေခဲ့ပါလျှက် ၊ အရာရာကိုမေ့လျော့ပြီး အိပ်နေခဲ့မိတာ … အချိန်တောင် အတော်နောက်ကျသွားခဲ့တယ် ။ ရုံးပြေးဖို့ တွေးပြီး အပျင်းထူခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရင်း လက်တွေခြေထောက်တွေ မော်တာတပ်ထားသလို ၊ ရုံးသွားဖို့ ခပ်မြန်မြန် ပြင်ဆင်ရပါတော့တယ် ။ မသွားမဖြစ်တဲ့ အနေထားကြောင့်ပါ ။ ရေချိုး ၊ ပြင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်ထိ စိတ်အနှောက်ယှက် မရှိသေးသော်လည်း ၊ အကျီ င်္ဝတ်ဖို့ ရွေးရတဲ့ အခါ အတော်ခေါင်းနောက်ရပြန်တယ် ။ လူအများကြားထဲ ဆက်ဆံ သွားလာနေရတဲ့ မိမိရဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုကလည်း ကာလ ၊ ဒေသ နဲ့ လျှော်ညီဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့ ၊အများအမြင့်မှာ မလျှော်မကန်မဖြစ်ဖို့ ၊ အ၀တ်ဘီဒိုဖွင့်ကာ ခေါင်းတဗြင်းဗြင်းကုတ်ရင်း စဉ်းစားရပြန်သေးတယ် ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အားနည်းခဲ့တာကြောင့် စိတ်တိုင်းကျ ၀တ်ရမယ့် အ၀တ် ရှာမရခဲ့ပါဘူး ။ ၀တ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အ၀တ်စားတွေကလည်း ၊ မီးပူမတိုက်ရသေး ….. ။ ဒုတိယ အကြိမ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရင်း ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကမှ ၀ယ်ထားတဲ့ အကျီ င်္ တစ်ထည်ကို ပါကင်ဖောက်ပြီး ကောက်ဝတ်လိုက်မိတယ် ။
အိမ်က မထွက်ခင် လိုအပ်တာတွေ ထည့်ပြီး ၊ မှန်ပြန်ကြည့်တတ်တဲ့ အကျင့်က အလျင်စလို အပြင်ထွက်ရမယ့် အချိန်မျိုးမှာတောင် ၊ မဖြစ်မနေလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှိခဲ့တယ် ။ မှန်ထဲခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီး ၊ လှည့်ထွက်တော့မယ့် စဲစဲ… အသက်စက်စက် အကျီ င်္ရှေ့ခြမ်းခါးနေရာမှာ ၊ စုတ်ပြဲနေတဲ့ 1.5cm ၀န်းကျင်ခန့် အပေါက်တစ်ခုကို မြင်လိုက်ရတယ် ….. ။
တေဘီ … :eee: အချိန်မရတဲ့ အထဲ ၊ အကျီ င်္အသစ်ကပါ အပေါက်နဲ့ဆိုတော့ … နူရာဝဲစွဲတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ ။ မိုးအေးအေးနဲ့ အိပ်ရချိန် တမနက်ခင်းလေးကို တွယ်တာ မိလိုက်တာ ၊ ဒီလောက် ကသိကအောက်ဖြစ်ရမယ်မှန်း ကြိုသိခဲ့ပါလျှင် အချိန်မှန်မှန် ၊ အိပ်ယာထဖြစ်ခဲ့မှာပါ ။ … တတိယအကြိမ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မှုနဲ့ အတူ ၊ အ၀တ်ဘီဒိုထဲက အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အကျီ င်္တစ်ထည်ကောက်ဝတ်ပြီး ရုံးကို ထွက်ခဲ့ရပါတော့တယ် ။ ရုံးကို သွားတဲ့ တလမ်းလုံး ရွတ်လိုက်ရတဲ့ မေတ္တာသုတ် ၊ သက်စေ့ထက်တောင် ကျော်မယ် ထင်ပါတယ် ။ အလုပ်ရောက်တော့လည်း ၊ ပါးစပ်ကို နှားရွက်တက်ချိတ်မတတ် ပြုံးရင်း အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါတယ် ။
မေတ္တာသုတ်ရွတ်ထားခဲ့လို့လား ၊ တချိန်လုံးနွားပွဲစားလို သွားဖြဲပြီး အလုပ်လုပ်နေခဲ့လို့လား မသိဘူး ၊ အိပ်ယာထနောက်ကျခဲ့တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာပြသနာမှ မရှိခဲ့ဘူး ။ အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်ချိန်တွေကို ကုန်ဆုံး စေခဲ့တယ် … ။ အလုပ်ချိန်လည်း ပြီးခဲ့ပြီ ၊ မနက်က အကျီ င်္အသစ်မှာ အပြဲ ပါတဲ့ ကိစ္စ ကွန်ပလိန်းတက်ဖို့ ဘိုကလေးဈေးအနီးက ဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်ကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ သာမန်အားဖြင့်တော့ …. ပိုက်ဆံ ရှင်းပြီးတဲ့ ၀ယ်ပြီး ပစ္စည်း ပြန်လဲမပေးတတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း အသစ်စက်စက် အကျီ င်္တစ်ထည်ကို သူ့တန်ရာတန်ကြေး 12,800/- ပေးဝယ်ခဲ့ရပြီး ၊ ၀တ်မယ်ထုတ်ကြည့်မှ အပြဲကြီးပါလာတာ ၊ ကိုယ့်ကံဆိုပြီးလည်း ငြိမ်မနေချင်တာကြောင့် ၊ မလဲပေးသည့်တိုင်အောင် ၊ ကွန်ပလိန်းသွားတက်ဖြစ်အောင် တက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ရောက်သွားခဲ့တာပါ။
ပထမဆုံး … ဒီအကျီ င်္ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အိုအေစစ် ကောင်တာကို ရောက်သွားခဲ့ပြီး ၊ တာဝန်ကျနေတဲ့ အရောင်းစာရေးတစ်ယောက်ကို အကျိုးကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ အရောင်းစာရေးက အကျီ င်္ကိုလည်း ထုတ်ကြည့် ကိုင်ကြည့်ပြီး ၊ အပေါက်က အရှေ့မှာ ပါနေတာ လဲပေးလို့ မရဘူးလို့ ပြောပါတယ် ။ တဆက်တည်းမှာပဲ ၊ ဒီအကျီ င်္က မ၀ယ်ခင်က ၀တ်ကြည့်သွားတဲ့ အကျီ င်္ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက အပေါက်အပြဲ မစစ်သွားတာ ၀ယ်ယူသူရဲ့ တာဝန်လို့သာ ပြောပြန်ပါတယ် ။ ကွန်ပလိန်းတက်ရုံလောက်သာ လုပ်ခဲ့မယ်လို့ တွေးပြီးလာခဲ့ပေမယ့် … ၊၀ယ်ယူခဲ့တဲ့ ကောင်တာကို ရောက်တော့ ပြေရာပြေကြောင်း စကားမျိုး ပြန်မကြားရတဲ့ အပြင် ၊ ကာစတမ်မာကိုပါ အကျီ င်္ QC မစစ်သွားခဲ့ရကောင်းလားလို့ နှုတ်ခမ်းတချွန်ချွန်နဲ့.. ပြန်အပြစ်တင်နေတဲ့ အရောင်းစာရေးမရဲ့ စကားကြောင့် စိတ်တိုလာမိတယ် ။ အကျီ င်္အပေါက်ပြဲကို သူတို့ဘက်က မစစ်လျှင်ပဲ သူတို့မှာ ပြသနာရှိတာကြောင့်လည်း အခုလို ငြင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ ကျွန်မဘက်ကလည်း အကျီ င်္တစ်ထည်ကို ချက်ချင်းဝယ်ပြီး ၀တ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေနေကို လက်မခံပါဘူး … အိမ်မှာရှိနေတဲ့ အကျီ င်္ဝင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့အ ချိန် ၀တ်မှာပေ့ါ … ၀တ်စရာမရှိအောင် စောင်ပတ်ပြီး လျှောက်သွားတာနေတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ… ။ ဒါကြောင့် နေ့ချင်းပြန်အကြောင်းမကြားနိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပါတယ် … ။
၀ယ်ခဲ့တဲ့နေ့… အဲ့ဒီနေ့က အကျီ င်္ တစ်ထည်ကို ၀တ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ၀တ်ကြည့်တဲ့အကျီ င်္ကိုပဲ ယူခဲ့သလား ၊ မယူခဲ့သလားဆိုတာတော့ တကယ့်ကို မမှတ်မိတော့တာပါ ။ ကိုယ်ဒီအကျီ င်္ဝတ်ခဲ့လား မ၀တ်ခဲ့လားဆိုတာ ၊ ဘုရားပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။ အကယ်၍များ ဒီအကျီ င်္ဝတ်ခဲ့မိသည့်တိုင်အောင် ကာစတမ်မာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအကျီ င်္ဝတ်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိမရှိ သိနိုင်ဖို့ ၀တ်ခဲ့တာမျိုးပါ ။ အကျီ င်္ ချည်ပြုတ်နေလား ၊ ပေါက်ပြဲနေလားဆိုတဲ့ QC စစ်ဖို့ ၀တ်ခဲ့တာ မဟုတ်တာကြောင့် ပခုံးနေရာ ၊ ခါးနေရာ လက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ အဆင်ပြေမပြေ ၊ အကျီ င်္ ကြယ်သီးတပ်ထားလျှင်တောင် ထုပ်စီးနေတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လောက်သာ စစ်ခဲ့တာ ။ အခုလို ကွာလတီ မစစ်သွားခဲ့ရကောင်းလားဆိုတဲ့ ပြောပေါက်ကြောင့်ရယ် ၊ နဂိုစိတ်ခံကိုက မဟုတ်မခံ စိတ်တိုတတ်တာကြောင့်ရယ်… စိတ်ထဲ နည်းနည်းအချဉ်ပေါက်လာပါတယ် ။ တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ကို ရှည်အောင်ထားပြီး ကာစတမ်မာတွေ အကျီ င်္ဝတ်ကြည့်တာ အကျီ င်္ ကွာလတီ စစ်ဖို့ မဟုတ်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ စစ်တာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပြန်တယ် ။
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အထည်ချုပ်လောကကပါပဲ ။ လုပ်သက်7နှစ်နဲ့4လရှိခဲ့ပါတယ် ။ အထည် တစ်ထည် အချောသပ်ဖို့ကို QC အဆင့်ဆင့် စစ်ရပါတယ် ။ ချုပ်ရိုးမှာ အပ်ချည် သုံးလေးချက်လောက် ကျော်နေလျှင်တောင် QC passed မဖြစ်တဲ့ အနေထားမျိုးပါ ။ အခုလို ပိတ်သားမှာ အပေါက်ပါတာမျိုးဆို အကျီ င်္ cutting မချခင် ပိတ်ခင်းကတည်းက သိရမှာမျိုးပါ ။
တခြားအထည်ချုပ်တွေမှာတော့ ဘယ်လိုလဲ မပြောတတ်ပါဘူး ။ကျွန်မတို့ စက်ရုံမှာတော့ ပိတ်စခင်းကတည်းကစပြီး နောက်ဆုးံ အထည်ဖြစ်တဲ့ အထိ ၊ process တဆင့်ခြင်းစီတိုင်းမှာ ၊ ကွာလတီကို ထိန်းသွားရပါတယ် ။ ကွာလတီသာ မကောင်းခဲ့လျှင် တနေရာမဟုတ် ၊ တနေရာမှာ သိနိုင်တဲ့ အနေထားမျိုးပါ ။ အထည်ချုပ်လောက အနေနဲ့က …နယ်မြေရပ်ခြားက … ကာစတမ်မာလက်ထဲ ပစ္စည်းရောက်သွားလို့ အနာဆာ ပါခဲ့လျှင် ပြန်လျှော်ရတဲ့အလေ့ထရှိပါတယ် ။ ပြင်လို့ ရတဲ့ အနေထား ဟုတ်မဟုတ်ပေါ်မူတည်ပြီး quotation လုပ်ထားတဲ့ ဈေးထဲက ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ဈေးဆစ်ချတာမျိုးပါ ။ တခါတလေများ အထည်က စင်းလုံးချောပါလျှက် ၊ သူတို့ ပေးထားတဲ့ အတိုင်းထွာတိုင်းမဟုတ်ပဲ ၊ pattern မှားလို့ 2cm အနည်းငယ်လောက် အပို အလို ဖြစ်နေလျှင်တောင် ရောက်ပြီးသား ကွန်တင်နာကို အလုံးလိုက် တထည်မှ မယူပဲ ပြန်ပို့ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ် … ။ ကွန်တင်နာ အသွားပြန် စရိတ် နဲ့ အထွေထွေစရိတ်တွေအပြင် ၊ အကျီ င်္တွေက ပြန်ပြင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တန်ရာ တန်ကြေး မပေးပါဘူး ။ ထက်ဝက်လောက် ဈေးလျော့ပြီး သတ်မှတ်ဈေးထက် ယူတာမျိုးအထိ အလျှော်စား လုပ်ရတာတွေ ရှိပါတယ် ။ အခု အပေါက် အပြဲ ပါလာတဲ့ အကျီ င်္ကလည်း … အိုအေစစ်တံဆိပ်နဲ့ … မိတ်အင်ထိုင်လန်ဆိုတဲ့ စာတမ်းနဲ့ပါ ။ ကျွန်မတို့လို ဖွံ့ဖြိုးစဲ နိုင်ငံတစ်ခုမှာတောင် ၊ အထည်ချုပ်တဲ့အခါ ကွာလတီ ဦးစားပေးလွန်းတာ … ထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးဆို ပိုလို့တောင် ဂရုစိုက်ကြပါလိမ့်မယ် .. ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွင်းမယ့် ပစ္စည်းမျို့ ကွာလတီ ကွန်ထရိုး နိမ့်ကျခဲ့တာလား … 80% acceptable လောက်သာ စစ်ခဲ့တာလားဆိုတာကတော့ … သူတို့company ကပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။ ဒီအကြောင်းတွေကို အရောင်းစာရေးမလေးကို ပြောပြတော့ ၊ သူလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလို့သာ တွင်တွင်ငြင်းပြီး ၊ ငွေရှင်းကောင်တာက သူထက် (စီနီယာ)ကျဟန်တူတဲ့ (ဟုတ်မဟုတ်မသိ) တစ်ယောက်ကို အကူညီတောင်းလို့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် သွားပြောပါတယ် ။ ကျွန်မ ဖြစ်စေချင်တာက ပြေရာပြေကြောင်းပြောပြီး ကာစတမ်မာ စိတ်ကျေနပ်အောင် company ကိုပြန်ပြောပြပေးပါမယ် ကွန်ပလိန်းတင်ပေးပါ့မယ် … စတဲ့ စကားမျိုး (တကယ်ပြောပြော မပြောပြော) ပြောစေချင်ခဲ့တာပါ … ။ ဒီတံဆိပ်ကို အရင်ကလည်း တခြား အထည်တွေ ၀တ်ခဲ့တာပါပဲ ပြသနာ တစုံတရာမရှိခဲ့ဘူး နှစ်နဲ့ ချီ အလျဉ်းသင့်သလို ၀ယ်ခဲ့တဲ့ တံဆိပ်တစ်ခု အခုလို အပေါက်ပြဲတွေပါလာလို့ သွားပြောတဲ့အခါ ၊ တာဝန်ယူမှု မဲ့တဲ့ စကားမျိုးကြားရတဲ့ အပြင် ကွာလတီ မစစ်ရကောင်းလားဆိုတဲ့ အပြစ်တင်သံမျိုးကြားရတဲ့အခါ …. ဒေါသတော့ ထွက်မိပါတယ် ။ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ..ပိုက်ဆံပေးပြီး ဒေါသ၀ယ်ယူခဲ့သလို ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ ။ စီနီယာကျမယ် ထင်တဲ့ ငွေရှင်းကောင်တာက တစ်ယောက်ကလည်း လဲပေးလို့မရကြောင်းသာ အပ်ကြောင်းထပ်ပြီးပြောကာ ၊ ကာတမ်မာ စစ်မသွားခဲ့ကောင်းလားဆိုတဲ့ လေသံမျိုးပဲ ထွက်လာပါတယ် ။ မိနစ် နှစ်ဆယ်ကျော် စကား အခြေတင်ပြောပြီးနောက်မှာ ကျွန်မ သဘောပေါက်သွားတာက ၊ ဒီအရောင်းစာရေးမရော ၊ ငွေရှင်းကောင်တာက အမျိုးသမီးရော … ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ရေရေရာရာ ချနိုင်မယ့် အနေထားမရှိတာကိုပါပဲ ။ မန်နေဂျာနဲ့ စကားပြောမယ် ခေါ်လိုက်ပါလို့ ပြောတော့ ၊ ဖုန်းဆက်နေတာတော့ မြင်လိုက်ရပါတယ် ။ တကယ်ပဲ ခေါ်သလား မခေါ်သလားတော့ မသိပဲ အချိန်နောက်ထပ် ဆယ့်သုံးမိနစ် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ် ။ မျှော်လင့်ထားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲ ၊ အပြစ်တင်သံလည်း ကြားရပြီး ထပ်ပြီး စောင့်ဆိုင်းရတာတွေကြောင့် ၊ သည်းခံနိုင်စွမ်းတော့ ကုန်သွားပါပြီ ။ ဒါကြောင့် အနီးနားက ဈေးဝယ်လာတဲ့ လူတွေ အပေါက်ပါတဲ့ အကျီ င်္နဲ့ ပုံစံတူ ၊ ကာလာကွဲ ၊ ဆိုဒ်ကွဲ အကျီ င်္တွေကို ကိုင်ကြည့်တဲ့အခါ ၊ ဒီဘရန်းက ၀ယ်မယ်ဆို ပစ္စည်းအရည်သွေးပါ စစ်ဖို့လိုတဲ့ အကြောင်း …. မစစ်မိပါကလည်း အပေါက်ပြဲပါတတ်ကြောင်း ၊ ကွန်ပလိန်းတက်တဲ့အခါလည်း ၊ တာဝန်ယူမှုမပြောနဲ့ ပြေရာပြေကြောင်းတောင် မပြောတတ်ကြောင်း ၊ ဒီဘရန်းနား ရောက်လာတဲ့ လူမှန်သမျှကို ပြောပစ်ခဲ့မိတယ် ။ မန်နေဂျာဖြစ်သူလည်း ရောက်မလာတာကြောင့် သူမလာလျှင် သူ့ရုံးခန်းထိ သွားတွေ့ ရုံသာ ရှိပါတော့တယ် ။ မန်နေဂျာရုံးခန်းဘယ်မှာလဲ မေးတော့ ၊ မန်နေဂျာရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်း ဒီလိုပါပဲ … သွားလည်း မထူးပါဘူးလို့သာ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ မန်နေဂျာလည်း အခု မရှိတဲ့ အပြင် ၊ ပစ္စည်းကလည်း ၀ယ်ခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က ၊ ရှင်းပြီးသား bill လည်း လက်ထဲ မရှိတော့တာကြောင့် သွားလည်း စစ်မယူခဲ့တဲ့ အပြစ်ကြောင့် ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ ။
စိတ်ထဲ အရမ်း ပြင်းပြလာပြီဆိုလျှင် ဘယ်သူပြောပြော (ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းကိုယ်လက်ခံထားသလို) ကိုယ့်စိတ်ထဲက အတိုင်းလုပ်ဖို့ နောက်မဆုတ်တတ်တဲ့ မွေးရာပါ အကျင့်ပါခဲ့ပါတယ် ။ ကုန်တိုက်တစ်ခုလုံးကို အုပ်ချုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ မန်နေဂျာနဲ့ ဒီပြသနာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကတော့ ၊ အရောင်းစာရေးမနှင့် ငွေရှင်းကောင်တာက အမျိုးသမီး ၂ ဦးစလုံးနှင့် အဖြေချင်း တူမယ်ဆိုသည့်တိုင်အောင် ၊ မန်နေဂျာလယ်ဗယ်နဲ့ လူတစ်ဦးအပေါ် ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ ပြောဆိုပုံစံမျိုး ကွာခြားမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ၊ မြေညီထပ်က ရုံးခန်းကို ကျွန်မ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ပြသနာတစ်ခုကို ငြင်းမယ်ဆိုလျှင်တောင် တဖက်လူ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ ငြင်းဆိုမှုမျိုးနဲ့ စကားပြောလိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်မိတာကြောင့်ပါ ။
ကျောင်းဖွင့်ရာသီဖြစ်တာကြောင့် စာရေး ပစ္စည်း တင်ချမှုတွေ ရှိနေတာလည်း မြင်ရတယ် ။ထောင့်ပေါင်းစုံက တပ်ထားတဲ့ စီစီတီဗွီ ကင်မရာတွေက ရုပ်ပုံတွေကို မော်နီတာ တစ်ခုကနေ ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ အမျိုးသား တစ်ဦးလည်းတွေ့ရတယ် ၊ သူ့အလုပ်နဲ့ သူရှုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသုံးဦးကိုလည်း တွေ့ရပြီး ၊ တခန်းလုံးမှာ အသက်အကြီးဆုံး ဖြစ်ဟန်တူသည့် အသက် ၆၀ကျော်ခန့်(ခန့်မှန်း) အမျိုးသား တစ်ဦးလည်း စာရင်းတွေ မှတ်နေတာ မြင်ခဲ့ရပါတယ် ။ အနီးစပ်ဆုံး ခုံမှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မန်နေဂျာနဲ့ တွေ့ ချင်လို့ပါပြောတော့ ၊ ခုနက စာရင်းမှတ်နေတဲ့ တခန်းလုံးမှာ အသက်အကြီးဆုံး အမျိုးသားကို ညွှန်ပြပါတယ် ။
ခုံရှေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားနဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး “ မန်နေဂျာနဲ့ တွေ့ ချင်လို့ပါ “ လို့ ပြောတော့ ၊ လုပ်လက်စကို ခဏရပ်လို့ မော့ကြည့်ပြီး “ကျွန်တော် မန်နေဂျာပါ ထိုင်ပါ ခင်ဗျာ”တဲ့ ။ ကျွန်မလည်း အန်ကယ်က မန်နေဂျာလား ဂမုန်းပွင့်တစ်ခုလုံးရဲ့ General Managerလားလို့ ထပ်မေးတော့ …. မန်နေဂျာတစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ် ။ အန်ကယ်ပါလို့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ပြန်ဖြေပါတယ် ။ တခြား ဌာနတွေ ၊ အလုပ်တွေမှာ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ပဲ ထားသလား ၊ ဌာနခွဲ တခုစီအလိုက် မန်နေဂျာတွေ အဆင့်ဆင့်ထားပြီး အုပ်ချုပ်သလားဆိုတာ မသိတာကြောင့် General Manager ဟုတ်လားလို့ မေးခဲ့မိတာပါ ။ ကျွန်မတို့စက်ရုံမှာဆို … မန်နေဂျာတွေ အများကြီး ရှိလို့ပါ မန်နေဂျာထဲမှာမှ အားလုံးကို ပြန်ပြီး control လုပ်ရတဲ့ GM က နောက်ဆုံး အဆင့်မို့ပါ ။
ကျွန်မခုံမှာ ထိုင်လိုက်တာနဲ့ ၊ မန်နေဂျာက ပြသနာ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့ အသင့်အနေထားရှိနေတဲ့ မျက်နှာတည်ငြိမ်မှုမျိုးနဲ့ တဖက်က ပြောမယ့် စကားကို အလေးပေးနားထောင်ဖို့ တိတ်တဆိတ်အသင့်ဖြစ်နေပါတယ် ။ ကျွန်မလည်း ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ပြောပြပြီး ပေါက်ပြဲတဲ့နေရာကိုလည်း ပြခဲ့တယ် … ။ အပေါ်မှာတော့ ဒီကိစ္စအတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်မတို့မှာလည်း ၀ယ်ထားတဲ့ အထောက်ထား ဘာမှ မရှိတော့တဲ့ အပြင် တပတ်လည်းကျော်ဝတ်ကြည့်မှ သိတာကြောင့် ၊ အန်ကယ့် အနေနဲ့ ဒီကွန်ပလိန်းအပေါ် ဘယ်လိုများ သဘောထားလဲ သိပါရစေလုိ့မေးတဲ့အခါ ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲ ။ အန်ကယ် အကျိုးကြောင်း မေးကြည့်ပါဦးမယ်လို့ ပြောပြီး ၊ သူ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူ ဖြစ်ဟန်တူတဲ့ ခပ်ချောချော အမျိုးသမီးကို အပေါ်ထပ်က အိုအေစစ် ကောင်တာသို့ အကျီ င်္အပြဲကို ပေးလိုက်ပြီး ၊ အကျိုးကြောင်းမေးစေပါတယ် ။ တကယ်တမ်း ဖုန်းဆက်မေးလျှင်လည်း ၊ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်သိရမယ့် အနေထားမျိုးမှာ လုပ်သက်ကြောင့် ရလာတဲ့ အတွေ့ ကြုံဖြစ်ဟန်တူတဲ့ ၊ စိစစ်မှုမျိုး လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ အတွင်းရေးမှုးကို ကိုယ်တိုင်လွှတ်လိုက်တာပါ ။
အတွင်းရေးမှုးက အပေါ်ထပ်တက်သွားချိန် စကား စမြည်ပြောရင်း ၊ ကျွန်မဆို ဘိုကလေးဈေး ဂမုန်းပွင့်ကို တပတ်တခါ မဟုတ်ရင်တောင် နှစ်ပတ်တခါ နီးပါးလောက် ပိတ်ရက်တွေမှာ ရောက်ဖြစ်တယ် ။ အရင် နေရာ အဟောင်းမှာကတည်းက အခုထိ ဈေးဝယ်ရတာ အဆင်ပြေလို့ရယ် ၊ မြို့ထဲက အိမ်နဲ့လည်း (ခြေလျှင်လျှောက်ရင် 5မိနစ်လောက်ပဲကြာအောင်) နီးတာကြောင့်ရယ် ခဏခဏရောက်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဖိနပ်ကလွဲလျှင် ဒီနေ့ တကိုယ်လုံးက ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေနဲ့ လက်ကိုင်အိတ်က ဒီဂမုန်းပွင့်ကပဲ ၀ယ်ခဲ့ကြောင်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဂမုန်းပွင့်ဆိုလျှင် ဒီတစ်ခုတင်မဟုတ်ပဲ ၊ မြေနီကုန်းရော ၊ ကမ္ဘာအေးဘက်ကို ပါ မကြာခဏရောက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပြီး အိုအေစစ်ကို ၀ယ်တာကလည်း အလျဉ်းသင့်သလို ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်နဲ့ ချီခဲ့ပြီး ဒီတကြိမ်လို အဆင်မပြေမှုမှာ ၊ အတော်လေး စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်မိပါတယ် လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ် ။ ပြောသမျှ စကားတိုင်း နားထောင်ပေးပြီး ဂမုန်းပွင့်မှာပဲ ၀ယ်နေတာဆိုတော့ သမီးမန်ဘာကဒ်လုပ်ထားပါလားတဲ့ …… ။ တခြားရှော့ပင်းစင်တာတွေမှာသာ ဘယ်နှစ်သိန်းဖိုးဆိုလျှင် မန်ဘာကဒ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုး သိထားပေမယ့် ၊ ဂမုန်းပွင့်မှာ မန်ဘာကဒ်ရှိမှန်း ကျွန်မ မသိခဲ့ပါဘူး ၊ ဒါပထမဆုံးအကြိမ် ကြားဖူးခဲ့တာပါ ။ ဒါကြောင့်လည်းရိုးရိုး ရှင်းရှင်းပါပဲ … မန်ဘာကဒ်ရှိမှန်းတောင် မသိဘူး အန်ကယ်ရေ လို့ ပြောလိုက်မိပါတယ် ။ ဒါဆို တစ်ခါတည်းလုပ်ပေးလိုက်မယ် ၊ နောက်တပတ်ကဒ်လာထုတ်ပြီးသုံးလျှင် ပစ္စည်းအမျိုးစားအလိုက် ရာခိုင်နှုန်း လျော့ပေးတဲ့အပြင် နှစ်ကုန်တဲ့အခါ အကျိုးခံစားခွင့်လေးတွေရှိလို့ ၊ ကဒ်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်လို့လည်း ပြောပြပါတယ် ။ သာမန်အားဖြင့်တော့ မန်ဘာကဒ်လျှောက်ထားဖို့ရာ ရုံးပိုင်းက ထောက်ခံတဲ့ လူ ၂ယောက်ရှိရမယ့် အပြင် ၊ တနေ့တည်း ၀ယ်ယူတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုး စုစုပေါင်း ****** ရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့ ။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ကျွန်မအတွက် လုပ်ပေးမယ့် မန်ဘာကဒ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပေမယ့် ၊ အကျီ င်္အပြဲ ကိစ္စ ဘယ်လို တုံ့ပြန်မှုမျိုးရှိမလဲ မသိသေးတဲ့အချိန် စိတ်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးမိတာက ၊ မန်ဘာကဒ်ပေးပြီး ကာစတမ်မာကို ပြန်ချုပ်တာလားလို့ တွေးထင်မိပါသေးတယ် ။ (ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဝူးကွီ )
ရုံးခန်းထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မန်ဘာကဒ်လုပ်တဲ့အခါ ဖြည့်စွက်ရတဲ့ ဖောင်တစ်စောင်တောင်းပြီး ၊ လိုအပ်တဲ့ အချက်များကို ကိုယ်တိုင်ရေးသွင်းစေပါတယ် ။ ဓါတ်ပုံတပုံလည်း လိုတာကြောင့် အိတ်ထဲ မွှေနှောက်ရှာပြီး လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်က ပုံတပုံကိုကဒ်လုပ်တဲ့အခါဖောင်မှာ ကပ်လျှင် သုံးဖို့ ပေးခဲ့ပါတယ် ။ မန်ဘာကဒ်လုပ်ဖို့ ရေးသွင်းပြီးချိန်မှာတော့ ၊ အတွင်းရေးမှုး အမျိုးသမီး ပြန်ရောက်လာပြီး မန်နေဂျာဖြစ်သူကို အကျီ င်္အပြဲ အခြေနေကြောင်း ရှင်းပြနေတာကိုလည်း မကြားတချက်ကြားတချက်နဲ့ ကြားခဲ့ရပါတယ် ။ အခြေနေအကြောင်းစုံသိပြီး ချိန်မှာတော့ မန်နေဂျာ ဖြစ်သူက ၊ ပြောလာပါတယ် ။ ဒီ အကျီ င်္က အပြဲ ပါလာတယ်လို့ ကွန်ပလိန်းတက်တော့မှတော့ အန်ကယ်တို့ဘက်က ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ် ။ အပြဲကလည်း ဂျိုင်းလို လက်လို နေရာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့် ၊ ၀တ်လိုက်လို့ ပြဲသွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆတာလည်း ပါပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အတွင်းရေးမှူးအမျိုးသမီးက ၊ သာမန်အားဖြင့်တော့ ၀ယ်ပြီး တပတ်ကျော်မှ လာတဲ့ ကွန်ပလိန်းမျိုးဆို ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် ၀ယ်ခဲ့တဲ့ အထောက်ထားပြဖို့လည်း မရှိတာကြောင့် ပိုလို့တောင် တာဝန်ယူပေးဖို့ ခက်ခဲကြောင်းပြောကာ ဒီကွန်ပလိန်းကိုတော့ အန်ကယ်ရဲ့ အဆုံးဖြတ်နဲ့ ဖြေရှင်းပေးမှာပါလို့ ပြောရင်းဘေးမှာ ရပ်နားထောင်နေပါတယ် ။
မန်နေဂျာ ဖြစ်သူရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို စိတ်ဝင်စားနေချိန်မှာပဲ …. မန်နေဂျာဖြစ်သူက5စက္ကန့်လောက် စဉ်းစားဟန်ပြုပြီး ၊ ဒီအကျီ င်္အပြဲအတွက် အန်ကယ်တို့ ဂမုန်းပွင့်ဘက်ကပဲ တစ်သောင်းပြန်ပေးပါမယ် ဘရန်းက ထိုင်းဘက်က သွင်းတာကြောင့် ကွန်ပလိန်း ဟိုဘက်ကို တဆင့် ပြန်တက်လို့ ရမရဆိုတာ မသေချာပေမယ့် ၊ ကုန်တိုက်အနေနဲ့ တာဝန်ယူပြီး စိုက်ရှင်းပေးတာပါလို့ ဆိုလာပါတယ် ။ ဒါဆို သမီး အဆင်ပြေရဲ့လား ၊ ကျေနပ်လားလို့လည်းမေးပါတယ် ။ ကျွန်မ၀ယ်ထားတာ တစ်သောင်း နှစ်ထောင့် ရှစ်ရာ ၊ တစ်ခါမှလည်း မ၀တ်ရသေးတဲ့အပြင် ၊ ကွန်ပလိန်းလာတက်လို့ အချိန်ကုန် ၊ စိတ်တိုလည်း ဖြစ်ရတာကြောင့် …. စိတ်ထဲ သိပ်တော့လက်မခံနိုင်သေးသလိုပါပဲ ။ လာခဲ့တုန်းက ၊ ပြေရာပြေကြောင်းလောက်သာ နားထောင်ရလျှင် စိတ်ကျေနပ်ပြီး ပြန်ဖို့ တွေးထားခဲ့ပေမယ် ၊ တကယ်တမ်း တာဝန်ယူပြီး လျှော်ပေးပါမယ့်ဆိုတဲ့ အနေထားမျိုးမှာ ကိုယ့်ဘက်ကတပတ်ကျော်မှ ကွန်ပလိန်းတက်ခဲ့တာတွေ ၊ လက်ထဲ ၀ယ်ခဲ့တဲ့ အထောက်ထား မရှိတော့တာတွေ ၊ ချြွင်းချက်နဲ့ မန်ဘာကဒ်လုပ်ပေးတာတွေ အကုန်မေ့ပြီး … အလားတူပုံစံတူ နောက်တထည် မရတာကိုပဲ စိတ်ထဲ တင်းခံနေမိတယ်(တယ်လည်းအပြောင်းလဲမြန်တဲ့စိတ်…) ။ ကျေနပ်လားလို့ မေးတော့ …. အားမနာပဲ စိတ်ထဲ ရှိတဲ့အတိုင်း ပြောခဲ့မိပါသေးတယ် .. ဒါပေမယ့်လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အမူယာ အသံနေအသံထားနဲ့ပါ့ …. ကိုယ့်ထက်လည်း အသက်အများကြီး ကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံဖို့ သင့်လျှော်တဲ့ အမူယာမျိုးပါ … ။ ကျေနပ်တယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး … အချိန်တွေကုန်တဲ့ အပြင် စိတ်အနှောက်ယှက်လည်း ဖြစ်ရပြီး ၊ တန်ဖိုးအတိုင်းလဲ ပြန်မရတောာာာာ့ လို့ ပြောမိတယ်ဆိုလျှင်ပဲ ….. ။ ဒါဆိုလည်း တန်ဖိုးအတိုင်းပဲ ပေးလိုက်ပါ့မယ် ၊ သမီးတို့ ကြိုက်တဲ့ တထည်ပြန်ဝယ်သွားပါ ၊ ဒီဘရန်းထဲက မဟုတ်လည်း တခြားကလည်းဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒီနေ့ မ၀ယ်ပဲ နောက်မှ လာဝယ်လည်း ရပါတယ်လို့ ပြောပြီး ၊ အတွင်းရေးမှူး အမျိုးသမီးကို ပိုက်ဆံ ထုတ်ပေးစေပါတယ် ။ အပြစ်တင်တဲ့ စကား တခွန်းတလေမှ ပြောမထွက်ပါပဲ ပြသနာကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဖြေရှင်း သွားခဲ့ပါတယ် ။ လျှော်ပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံကလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးခဲ့တာကြောင့် စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ ၀န်ထုပ်ဝန်ဖိုးမဖြစ်ပဲ ၊ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ အိမ်ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ကွန်ပလိန်းတစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခဏတာ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ၊ ကျွန်မအတွက် သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးခဲ့ပါတယ် ။ မန်နေဂျာဖြစ်လို့ အဆောင်ယောင် ဟိတ်ဟန်တွေ ၊ အသက်ရွယ်ကွာခြားမှုတွေကို အဓိက မထားပဲ ပြသနာကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မန်နေဂျာနဲ့ စကား စမြည်လည်း ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဘိုကလေးဈေး ဂမုန်းပွင့်မှာ မန်နေဂျာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ သက်ပြည့် ပင်စင် ယူပြီးချိန်က စလို့ အခုဆို (၁၀)နှစ်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီ ။ အန်ကယ့်သားရဲ့ သူငယ်ချင်းကုန်တိုက်ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ၀င်ကူညီပေးရင်း အခုလို နှစ်ကြာထိ အလုပ်လုပ်ဖြစ်နေကြောင်း တက်ကြွစွာပဲ ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ် .. ။ ယခင်ကတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်း အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ အခု အ ချိန်မှာ အသက်(၇၀)ကျော်ပါပြီ (အမြင်အားဖြင့် အတော်ငယ်နေတာကတော့ အံ့သြစရာပါပဲ …။ သားသမီးတွေလည်း ကြီးကုန်ပြီး သမီးအငယ်ဆုံးဆို ၊ ကျွန်မထက်ပင် အသက်ကြီးကြောင်းလည်းပြောပြကာ … သမီးအသက်ကအလွန်ဆုံး ၂၅ပေါ့လို့လည်း အရွန်းဖောက်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ …. လက်ရှိအသက်ကို ပြောပြရင်း ၊ ပြိုင်တူ ရယ်မောဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ ခုနက အဆင်မပြေမှုတွေလည်း မေ့သွားခဲ့တယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ ပီပီ အတိတ်ဘ၀က ကံကံဧ။် အကျိုးကိုလည်း ယုံကြည်ပြီး ရေစက်ပါမှုကြောင့် ဒီအချိန်မှာ လာတွေ့ဆုံရတာမျိုးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရတာလည်း ၀မ်းသာမိပါကြောင်း ပြောရှာပါသေးတယ် ။ တစ်ခုခုဆို အကြံပေးပါ ၊ ဝေဖန်ပါလို့လည်း အင်ဗိုက်လုပ်ပြီး ၊ နိမ်းကဒ်တောင်းလို့ ပေးခဲ့ပါသေးတယ် ။ …. လူကြီးတွေအသက်ရွယ်ထောက်လာတဲ့အခါ… တဖန်ပြန်ပြီး ခိုလှုံတဲ့ ဘ၀မျိုးရောက်လို့ ဒီပရက်ရှင်ဝင်တာမျိုး များပါတယ် ။ ကျန်းမာရေး ဆုတ်ယုတ်ပြီး အင်အားချိနဲ့လို့ …အိပ်ယာထဲ လဲနေရတဲ့ သက်တူ ရွယ်တူ အဖိုးဘွားတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ …. ။အခုဒီ အန်ကယ်ကတော့ လက်ရှိအသက်၇၀မှာ မန်နေဂျာဝင်လုပ်နေတုန်းဖြစ်ပြီး သွက်သွက်လက်လက် နိုင်နိုင်နင်းနင်း စီမံခန့်ခွဲ နိုင်တုန်းပါပဲ …. ။ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေ အားလုံးရပ်ပြီး အေးဆေး စကားပြောပေးခဲ့တဲ့ မန်နေဂျာ့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ် ။
ပြသနာတစ်ခုက အစီချီခဲ့ပေမယ့်လည်း ၊ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်အနေနဲ့ မိတ်ဆွေ တိုးခဲ့တဲ့ အပြင် ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သတ်လို့ မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း သိနားလည်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီကိစ္စ မန်နေဂျာရဲ့ တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုကသာ အရောင်းစာရေးမတွေလို တဖက်စောင်းနင်းကျနေလျှင် ၊ သေချာတာတော့ ကျွန်မလည်း နောက်တစ်ခေါက် ဒီဆိုင်က လာထပ်ဝယ်ဖို့ စိတ်ပါတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ၀ယ်နေကြ လူတွေထဲ ကိုယ်တဦးတစ်လျှောက်လျော့သွားရုံနဲ့ မထိခိုက်နိုင်ပေမယ့် ၊ ကျေနပ်လောက်တဲ့ တာဝန်ယူမှုမျိုးပေးပြီး ကာစတမ်မာ တစ်ယောက်ပြန်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာလည်း သူ့အသက်ရွယ် ၊ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့ ကြုံအပြင် စိတ်သဘောထား ပြည့်တဲ့ လူဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပါပါလိမ့်မယ် ။ စကားပြောနေခဲ့ရတဲ့ တဒင်္ဂတွင်းမှာပဲ မျက်နှာသွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီး …ရိပ်စားမိခဲ့တာက ၊ ပူပူလောင်လောင် အခြေခံ စိတ်ဓါတ်မျိုးမရှိသူမျိုးပါ ။ တည့်တည့်ဦးတည်လာတဲ့ ပြသနာကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်လိုက်နိုင်ပုံကိုတော့ ….. တကယ်ပဲ အားကျမိပါတယ် ။ တဖက်စကားကိုလည်း နားထောင်ပြီး ၊ အဖြစ်မှန်ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်သွားစုံစမ်းစေတဲ့ အကွက်စေ့တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးကလည်း … လုပ်သက်ကြောင့်ပဲ ရလာတဲ့ အတွေ့ ကြုံမျိုး ဟုတ်မဟုတ်သိပေမယ့် …. အတုယူစရာတွေ အများကြီးရခဲ့ပါတယ် ။ အသက်ရွယ်ကွာဟမှုကို ဘေးဖယ်ပြီး မိမိနဲ့ စကားပြောသူတစ်ယောက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောခွင့်ပေးကာ ၊ စိတ်ပါလက်ပါ နားထောင်တတ်တဲ့ အမူကျင့်ကလည်း ၊ အကြီးမှန်းမသိ အငယ်မှန်းမသိ (ကိုယ်ကမှန်မှန်မှားမှား) စိတ်တိုလျှင် ထထအော်တတ်တဲ့ ကျွန်မအတွက် သတိထားပြင်ဆင်ရမယ့် နမူနာကောင်းတစ်ခုပါပဲ ။မျက်နှာအမူရာ ၊ အသံအနေထားကစလို့ … လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရမှာ တကယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့ အလေ့ကျင့်ကောင်းတွေ လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ပိုမို အဆင်ပြေဖို့ အတွေ့ ကြုံကောင်းအဖြစ် အမှတ်မထင် ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ရပ်ကတော့ ဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ … ။
အဲ့ဒီနေ့က မိမိကိုယ်တိုင် ၀ီရိယအားနည်းလို့ ၊ မနက်ခင်းတစ်ခု ဗြုတ်စဗျင်းတောင်းနိုင်ပြီး အကျည်းတန်ခဲ့ပေမယ့် ….. ကံကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ အဖြစ်နဲ့ ….. ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
ဂမုန်းပွင့် သူဌေး လဲ သူ့လိုလူ ရထားတာ ကံကောင်းတယ် လို့ မြင်မိပါတယ် etone ရေ ။
etone အရေးကောင်းတာ နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ပြန်စဉ်းစားမိတယ် .. ငါ ကော ဒီလို ပြဿနာ မျိုး ဖြစ်လာရင် ဒီလို သွေးအေး စွာ နဲ့ တုန့်ပြန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ..
etone အရေးကောင်းတာ နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ပြန်စဉ်းစားမိတယ် .. ငါ ကော ဒီလို ပြဿနာ မျိုး ဖြစ်လာရင် ဒီလို သွေးအေး စွာ နဲ့ တုန့်ပြန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ..ရှဲရှဲံပါ
အသက်အရွယ် အတွေ့အကြုံ နဲ့ ရာထူး လယ်ဗယ် ကွာတဲ့အခါ ပြဿနာဖြေရှင်းပုံချင်းလည်း ကွာသွားတာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ကုန်တိုက်ရဲ့ နာမည်ကို ထိန်းဖို့တွက် ၁၂၈၀၀ ဆိုတဲ့ ငွေဟာ မများတဲ့ ပမာဏပါ။
ကပ်စတန်မာကို ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကြော်ငြာခ သက်သာတယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်က လူတွေ လက်တွေ့ သိကြဖို့ လိုပါတယ်။
(အခုဆို တေးကလုံက မေတ္တာရိ ကြော်ငြာဝင်ပေးသွားပြီ)
ဒီလို​တော်​တဲ့မန်​​နေဂျာမျိုး ရထားတဲ့လုပ်​ငန်း မ​အောင်​မြင်​စရာမရှိပါ။
ကျ​နော်​သာဆို ဒီလိုပြန်​ပြီ ကွန်​ပလိန်​မတက်​ရဲပါဘူး။မဟုတ်​မခံစိတ်​ဓာတ်​ကို
အရင်​ကတည်းကသိပြီး တာမို့ ချီးကျူးပါတယ်​။ဒီက ၀န်​ထမ်းအများစုက
ကိုယ်​ပိုင်​ဆုံးဖြတ်​ပိုင်​ခွင့်​မရှိကြပါဘူး။မှားရင်​ သူတို့အိပ်​စိုက်​ရမှာ ဖြစ်​လို့ဘူးခံငြင်း
ရခြင်းဖြစ်​ပါမယ်​။ဒါ​ပေမယ့်​ သူတို့မှာ ကာစတန်​မာကို ​ပြေလည်​​အောင်​​ပြောပြရင်​
ကိစ္စအ​တော်​များများ ​ပြေလည်​နိုင်​တယ်​ဆိုတာ မသိကြတာခက်​တယ်​။ဒါ​ကြောင့်​
မကြီးသင့်​တဲ့ကိစ္စက ပိုကြီးသွားရတယ်​။နမူနာဆိုရင်​ အခုပို့က သက်​​သေပဲ​နော်​။
သူတို့​ပြေလည်​​အောင်​​ပြောရင်​ ဒီအတိုင်​ ပြန်​ခဲ့မှာကို သူတို့​ကြောင့်​ အရင်းပြန်​ရတဲ့အပြင်​
ဒီ မန်နေဂျာ ပညာတတ် သွားပြီ။
တုံတုံ ရေ တကယ်တော့ ဘောက်ချာပြနိုင်ရက် နဲ့ ပြန်မလျော်ရင် ဆိုင်ရဲ့ အလွန်ပါ။
ဘောက်ချာ မပြနိုင်ဘဲ အလျော်ပေး လိုက်တာက တကယ်တော့ အတော်လေး အလိုလိုက်လိုက်တဲ့ သဘောမှာရှိမယ်။
လူပုံ ကိုလဲ ကြည့်ပြီး ကြောက်သွားတာလဲ ပါနိုင်တယ်။
ဆူပါမာ့ကက် မန်ဘာကာဒ် မှာ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံကပ် တာတော့ မကြုံဖူးဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စားသုံးသူကို စိတ်ချမ်းသာမှု ပေးလိုက်တဲ့ မန်နေဂျာ ကိုတော့ ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
ဒါမျိုး ဆိုင်တွေမှာ ပိုအားပေးကြမှာ အမှန်ဘဲ။
ဒါပေသည့် လိုက်လျောမှုပေါ်မှာ အရမ်းအခွင့်အရေး ယူလွန်းသွားကြ မှာလဲ ကြောက်ရသေးတယ်။
သူတို့လဲ ဒီလောက်တော့ မညံ့ပါဘူးလေ။ ကိုယ့်ထက်ပါးမှာပါ။
ဒါမျိုး ကောင်းတာတွေ သတင်းများများဖြန့်ပေးနိုင်ပါစေ လို့ လဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒါထက် အရီး တူမလေးမှာ ပိုးဟတ်ချီး တွေ့လိုက်၊ အင်္ကျီပြဲ တွေ့လိုက် နဲ့ ယတြာ (လက်ဖွဲ့ကောင်း) လိုနေပြီ ထင်တယ်။
မြို့ပိုင်သူကြီး မင်း ဆီ မှာ လက်ဖွဲ့ကောင်း ရှိတယ်လို့ နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက် က သတင်းကြားတာဘဲ။
ကွန်ပလိန်းစင်တာ သို့ မဟုတ် ရီဆက်ရှင် က ခလေးမ လေးတွေ ကို သိပ်သနားမိတယ် ဆိုတာလေးပဲ ပြောခဲ့ပါတယ် ဒေါက်တာရယ် ( ဒေါက်တာ=ခရက်ဒစ်တူ ကိုအောင်ပု )
သူ့ နေရာ၊ သူ့ ဘက်ကနေ
အဆင်ပြေအောင် ကိုယ်တွယ်သွားပုံလေးကို သဘောကျမိပါရဲ့
ကိုယ်တွေလဲ အဲလိုဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရဦးမှာပါလားနော်…….
အယ် .. တခြား ကော့မန် 10ခုကျော် ဘယ်ရောက်သွားသဒုံး … ပျောက်ကုန်ဘီ … ။ :chee:
အဲဒါ.. မနေ့က တရက်စာနောက်ကျတဲ့ ဘက်ကပ်တင်ထားတာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့.. အဆင်မပြေတာတွေအတွက်.. ရွာသူားများကို တောင်းပန်ပါကြောင်း…။ လောလောဆယ်.. ဆာဗာပိုင်တဲ့ဆီကို မေးထားပါကြောင်း..။
တို့လည်း ဂမုန်းပွင့်မှာ ဈေးခဏခဏ၀ယ်ဖြစ်တယ် … ပြီးခဲ့တဲ့ လေး ငါးလလောက်တုန်းက သမီးအတွက် မျက်လုံးခြယ်တဲ့ စုတ်တံလေးဝယ်တာ အောက်မှာရှိတဲ့ အလှအပကောင်တာကကောင်မလေးတွေက စိတ်မရှည်စွာဆက်ဆံတာခံခဲ့ရတယ် … ဘယ်ရမလဲ ဒီကလည်း ပြန်ဟောက်ခဲ့တယ်လေ … မန်နေဂျာအထိတော့မပြောခဲ့ပါဘူး … အခုလည်း ကလေးမွေးပြီး နေ့တိုင်းလိုလိုရောက်ဖြစ်တယ် …. ကလေး သေးခံဝယ်တဲ့ကောင်တာက ကောင်မလေးတွေက ကိုယ်ကပစ္စည်းအကြောင်းနားမလည်လို့မေးတာ ကို ပြန်ခနဲ့တာခံခဲ့ရတယ် …. နောက်ပြီး အောက်ထပ်က အစားအသောက်တွေရောင်တဲ့နေရာကို စက်လှေခါးကဆင်းရင် ၀င်လို့ရတဲ့နေရာက၀င်တာကို ဂိတ်စောင့်အဖိုးကြီးက ဟိုဘက်က၀င် ဟိုဘက်က၀င်လို့ အတင်းပြောတယ် … ဒါနဲ့မေးလိုက်တယ် ဘာလို “၀င်” လို့ရေးထားပြီး မ၀င်ခိုင်းတာလဲလို့ အဲဒီတော့ ပစ္စည်းအပ်ကောင်တာက ၀န်ထမ်းတွေက၀င်လို့ရပါတယ် … ပစ္စည်းကိုကောင်တာမှာသွားအပ်ဖို့ပြောတာပါတဲ့ …. နောက်ထပ်အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ် … ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ သွားဝယ်ရတာ ပစ္စည်းစုံတယ် ကိုယ်နဲ့လည်းနီးလို့လေ …. ကိုယ်တောင်စဉ်းစားမိသေးတယ် ဂမုန်းပွင့်က ၀န်ထမ်းတွေတချို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက သိပ်ညံ့ဖျင်းတယ် … ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာလူကြီးကိုတောင်သွားတိုင်မလား စဉ်းစားမိတယ် …. ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုပြီးတော့ မတိုင်ချင်ပါဘူး … ကိုယ့်ကြောင့် သူများထမင်းအိုးကွဲသွားမှာစိုးမိလို့ပါ ….. ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း လူအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ … လူတိုင်းကို အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံခဲ့တာကြောင့် အခြားဝန်ထမ်းတွေလည်း ကိုယ့်လိုသူများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိတ်ရှည်ရှည်ဆက်ဆံစေချင်တယ် …